ပုသိမ်မှာ ဆံပင်တစ်ပိဿာစျေး ရွှေစျေးနီးပါး ကျပ်သိန်း၂ဝလောက်ရနေ – SainPwar
SainPwar > local news > ပုသိမ်မှာ ဆံပင်တစ်ပိဿာစျေး ရွှေစျေးနီးပါး ကျပ်သိန်း၂ဝလောက်ရနေ
၁၀ မှတ်ဖိုး ဖြေလည်း အအောင်ပေးမယ့် စကစ ဆယ်တန်းအောင်စာရင်း ထွက်မယ့်နေ့ ကြေညာပြီ
ဆံပင္ေစ်းကြက္မွာ ယခင္က မူဆယ္မွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္နိုင္ငံသို႔သာအဓိက တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္ပိုင္းေစ်းကြက္ေျပာင္းလဲသြားၿပီး ျပည္တြင္းတြင္ေနထိုင္ေသာ ျပည္ပနိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားမွ အဝယ္ဒိုင္သို႔ တိုက္ရိုက္ခ်ိတ္ဆက္ကာ ဝယ္ယူၾကေၾကာင္း သိရပါတယ္။
ဆံပင္ေစ်းႏႈန္းမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ေလးငါးႏွစ္ခန္႔က တစ္ပိႆာကို က်ပ္ တစ္သိန္းမွ ေျခာက္သိန္း ေစ်းကြက္အတြင္းရွိၿပီး ယခုေပါက္ေစ်းမွာ ယခင္ထက္ မ်ားစြာျမင့္တက္မႈရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။
ဆံပင္ဝယ္ယူရာတြင္ ကၽြတ္စ၊ အပြအရိုင္းႏွင့္ အတိုအရွည္ လက္မဆိုဒ္မ်ားမွာ ၁၂ လက္မ မွ ၃၂ လက္မအထက္ လက္မအတိုအရွည္လိုက္ၿပီး တစ္ပိႆာကို က်ပ္ႏွစ္သိန္းခြဲမွ က်ပ္ သိန္း ၂၀ ခန္႔ အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
ဆံပင္ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ဝယ္ယူထားေသာဆံပင္ကုန္ၾကမ္းကို ဆပ္ျပာျဖင့္ေရသန္႔စင္ေဆးကာ ေနပူလွန္းၿပီး အတိုအရွည္ဆိုဒ္ခြဲ၍ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ပိႆာခ်ိန္ ျပည္ပေစ်းကြက္တြင္ ကီလိုႏွင့္ေရာင္းခ်ရေၾကာင္း သိရပါတယ္။
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ပြည်ပပို့ကုန်များတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သော ဆံပင်စျေးကွက်မှာ လက်ရှိ တစ်ပိဿာကို အတိုအရှည်လိုက်ပြီး ကျပ် နှစ်သိန်းခွဲမှ ကျပ် သိန်း ၂၀ ဝန်းကျင်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေကြောင်း ပုသိမ်မြို့ရှိ ဆံပင်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များထံမှ သိရပါတယ်။
ဆံပင်စျေးကွက်မှာ ယခင်က မူဆယ်မှတစ်ဆင့် တရုတ်နိုင်ငံသို့သာအဓိက တင်ပို့ရောင်းချမှုရှိခဲ့သော်လည်း ယခုနှစ်ပိုင်းစျေးကွက်ပြောင်းလဲသွားပြီး ပြည်တွင်းတွင်နေထိုင်သော ပြည်ပနိုင်ငံသားများနှင့် ပြည်ပနိုင်ငံများမှ အဝယ်ဒိုင်သို့ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ကာ ဝယ်ယူကြကြောင်း သိရပါတယ်။
ဆံပင်စျေးနှုန်းမှာ ပြီးခဲ့သည့် လေးငါးနှစ်ခန့်က တစ်ပိဿာကို ကျပ် တစ်သိန်းမှ ခြောက်သိန်း စျေးကွက်အတွင်းရှိပြီး ယခုပေါက်စျေးမှာ ယခင်ထက် များစွာမြင့်တက်မှုရှိကြောင်း သိရပါတယ်။
ဆံပင်ဝယ်ယူရာတွင် ကျွတ်စ၊ အပွအရိုင်းနှင့် အတိုအရှည် လက်မဆိုဒ်များမှာ ၁၂ လက်မ မှ ၃၂ လက်မအထက် လက်မအတိုအရှည်လိုက်ပြီး တစ်ပိဿာကို ကျပ်နှစ်သိန်းခွဲမှ ကျပ် သိန်း ၂၀ ခန့် အရောင်းအဝယ် ပြုလုပ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
ဆံပင်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းများအနေဖြင့် ဝယ်ယူထားသောဆံပင်ကုန်ကြမ်းကို ဆပ်ပြာဖြင့်ရေသန့်စင်ဆေးကာ နေပူလှန်းပြီး အတိုအရှည်ဆိုဒ်ခွဲ၍ ပြည်တွင်းစျေးကွက်တွင် ပိဿာချိန် ပြည်ပစျေးကွက်တွင် ကီလိုနှင့်ရောင်းချရကြောင်း သိရပါတယ်။
ပြည်ပစျေးကွက်တွင်ဆံပင်ကို ရုပ်ရှင်ကားများတွင် ဆံတု၊ ဆံထုံး၊ မုတ်ဆိတ်မွေး၊ ပါးသိုင်းမွေးအတုပြုလုပ်ကြပြီး အလှကုန်ပစ္စည်းကိရိယာအဖြစ် ပြုပြင်ပြီးလည်း အသုံးပြုကြကြောင်း သိရပါတယ်။
Previous Article ထိုင်းချဲ 3D တိုက်ရိုက် LIVE စတင်နေပါပီ(အားလုံးချဲပေါက်ကြပါစေ)
Next Article (၃)ကြိမ်မိုးကြိုးခခဲ့တဲ့ ကျိုက်ထီးရိုးစေတီတော်မြတ်၏ ကျောက်လုံးတော်နားမှာ အချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့ မိုးကြိုးစက်ကွင်းရှိနေတာလား
အဖိုး…စျေးဦးပေါက်ပြီလား…. ?? မပေါက်သေးပါဘူး သားရယ်…
မိန်းခလေးမှန်ရင်သိမ်းထားဖို့လို့တဲ့ မိန်းကလေးတိုင်းအတွက် လျှို့ဝှက်ချက်